Shiinaha FOTON C10 / C12 warshad iyo soosaarayaasha | Foton
Culayska Curb 12T
Awoodda Rakaabka / Fadhiga 92 / 24-46
Qaabdhismeedka Dabaqa Gelitaan hoose / Dabaq hoose / Laba tallaabo
Isku xidhka albaabka Laba albaab oo labalaab ah oo labalaab ah
Mashiinka la hagaajiyay
Tixdani waxay la mid tahay matoorrada la kulmaya heerka EURO II illaa heerka EURO V;
Mashiinka naaftada / NG ayaa la heli karaa
Tixdani waxay la mid tahay gudbinta kaladuwan ee u dhaxeysa gudbinta gacanta iyo gudbinta otomaatiga;
Oo ay ku jiraan gudbinta ZF AllisionVoith Diwa.
Sanadkii 2017, Foton AUV waxay 1000 bas oo tamar nadiif ah u dhiibtay shirkadda basaska Yangon ee Myanmar, iyagoo fulinaya amarka ugu weyn ee warshadaha basaska shiinaha.
Basaska Foton waxay maraan baaritaanka adag ee gawaarida iyo tijaabinta gawaarida in kabadan 100 kun oo kiilomitir xaalada noocyada kaladuwan ee wadada iyo xaaladaha cimilada ugu xun sida heerkulka sare, heerkulka hoose iyo cadaadiska hooseeya.